सूर्या लाइफको हकप्रद भर्ने आइतबार अन्तिम दिन - Aarthiknews
सूर्या लाइफको हकप्रद भर्ने आइतबार अन्तिम दिन
काठमाडौं । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भदौ ८ गतेदेखि बिक्रीमा ल्याएको ७० प्रतिशत हकप्रद भर्ने असोज १२ गते आइतबार अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले २ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउन १० बराबर ७ को अनुपातमा कम्पनीले ८८ लाख ७४ हजार ९६ कित्ता हकप्रद शेयर जारी गरेको हो ।
हकप्रद प्रयोजनका लागि साउन २९ गते बुक क्लोज गरेको थियो । बुक क्लोजको आधारमा साउन २८ गतेसम्म कायम सदस्यहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । यस हकप्रद शेयरलाई केयर रेटिङ नेपालले ग्रेड ४ रेटिङ प्रदान गरेको छ । यस रेटिङ्ले औषत भन्दा कमजोर आधार भएको जनाउछ ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी १ अर्ब १३ करोड १९ लाख रहेको छ । कम्पनीले असार १० गते १२ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरि सकेको छ । बोनस पश्चात रू. १ अर्ब २६ करोड ७७ लाख २८ हजार चुक्ता पूँजी पुगेको कम्पनीले सोही पूँजीको आधारमा हकप्रद विक्री गर्न अनुमति मागेको हो । गत असार मसान्तसम्म सुर्या लाइफले रू. २० करोड ८६ लाख १३ हजार खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो असार मसान्तसम्म रू. १२ करोड १२ लाख ६५ हजार थियो ।
महालक्ष्मी इन्स्योरेन्सको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न
पाँच हजार छोरीहरुको बीमा
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले शेयरधनीहरुलाई १०.२३ प्रतिशत लाभांश दिने